Parachute ~ Journey-Assist - Skydiving. Tips.
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Sidina Mifohaza » elon'aina
Voalohany indrindra, ny parachute dia singa iray natao hanalefaka ny hafainganam-pandehan'ny fahalalahana maimaimpoana (for - manohitra (grika) sy latsaka - manary (fr)) ho an'ny olona na entana. Saingy manana karazany maro izy izay manao asa hafa mitovy.
Karazan-javaboary ho an'ny tanjon'ny tanjona
Karazan-javaboary ho an'ny olona
Fitaovana rafitra parachute
Parachute brake. Ampiasaina hampihena ny halaviran'ny fiparitahana amin'ny fiaramanidina fitaterana sy ny fiaramanidina miaramila. Ao amin'ny hazakazaka mitarika ho an'ny fijanonana fiara dia ampiasaina koa ny parachète brake.
Fanamafisana ny parachute. Natao hanamafisana ny toeran'ny vatana na ny zavatra mandritra ny fahalavoana malalaka.
Parasy mivalona. Izy ireo dia manampy ary ampiasaina hanitarana ny dome main na reserve (parachute) na hanamafisana ny fanokafana azy. Matetika izy ireo dia antsoina hoe "jellyfish“, Ho an'ny endrika mampiavaka.
Parachutes Spacecraft. Ampiasaina izy ireo ho an'ny fiaramanidina spacecraft (probes) ao amin'ny planeta an'ny masoandro. Mazava ho azy, ho an'ny fandidiana ny parachute dia tsy maintsy manana rivo-piainana ianao.
Ny malaza indrindra, mazava ho azy, dia ny parachute mivezivezy, izany no ahafahan'ny olona mitsambikina avy amin'ny fiaramanidina manidina amin'ny haavo lehibe iray ary ny tany tsy am-pilaminana amin'ny tany.
Ary koa, ny parachute dia fahaiza-manao iray mialoha sy tsy maintsy alehanao raha ilaina amin'ny karazana aeronautika ianao. Aoka izany skydiving, wingsuit, na fihetsika hafa ampiarahina amin'ny fahalavoana olona iray, izany rehetra izany amin'ny farany, mba hahitana vokatra mahomby, dia tokony hofaranana amin'ny sehatra misy azy amin'ny parasy. Amin'ny sidina milina (autogyro, hang glider, glider и de Al.) Ilaina koa ny parachute ho toy ny rafitra fiarovana, raha misy zavatra diso. Araka ny hitanao, ny maha zava-dehibe ny parachute dia sarotra ny manadino loatra.
Fiofanana manazatra. Matetika dia mihazakazaka miaraka amin'ny slot. Salan'ny fidirana Parachutes. Ampiasaina amin'ny dingana fanazaran-tena voalohany amin'ny fanoratana sy ny fitsambikina voalohany. Fahasamihafana ao ambany fifehezana ambany. Ny hafainganam-pandehan'ny fahalavoana miaraka amin'ny parachute toy izany dia eo amin'ny 5m / s. Mahatratra ny halavam-pampianarana avy amin'ny 150m mankany 2,2km.
Fanavotana parasy. Namboarina amin'ny fitaterana vonjy maika avy amin'ny fiaramanidina fiaramanidina. Ny haavon'ny fangatahana dia manomboka amin'ny 200m ka hatramin'ny 9km (raha vita avy amin'ny haavony lehibe kokoa ny mitsambikina dia mila manokatra ny parachute aloha ianao alohan'ny handefasana ny marika 9km). Ary koa, ny parachute toy izany dia fitaovana misy oksizenina, raha toa ka nisy 5 km km ny haavon-tsokosoko.
Fampitandremana ho an'ny tanjona manokana. Ireo ny parasy sy famokarana tsy misy faobe. Noforonina sy ampiasaina, samy manana ny tanjony manokana.
Famarenana parasy. Spherical na square. Namboarina ho fitaterana olona sy entana. Mahatratra ny halavam-pampianarana avy amin'ny 200m mankany 8km.
Mampitohy Parachutes. Manaova ny anjara toeran'ny parachute ho fiarovana, raha toa ka tsy nisokatra ny voalohany, na simba nandritra ny sidina. Matetika miaraka amina rafitra otomatis valiny. Manokatra parachute tahiry ny rafitra raha toa ka nandalo ny haavon'ny haavony ianao, saingy mbola tonga amin'ny faran'ny fahalavoana maimaim-poana (ny haavon'ny haavony dia voafaritra ampolony isan-tsegondra amin'ny fandrefesana ny mari-pana sy ny tsindry amin'ny rivotra).
Halan-jaza fanatanjahantena (akorandriaka). Rectangular, semi-elliptical, elliptical amin'ny endrika. Ny taloha dia manana toetra aerodynamic malemy. Mialoha. Elliptical, araka izay azo fifehezana ary haingana amin'ny fiaramanidina mijoro sy haingana. Ampiasaina amin'ny parachuting matihanina (avela hampiasa aorian'ny hitsambikina 500 miaraka amin'ny parachute tsotra).
Fitaovana ny rafitra parachute.
Rafitra fampiatoana Knapsack. Izany dia atao eo amin'ny soroka, na ny tongotra roa, ary ny lohan'ny paratrooper. Izy no tompon'andraikitra amin'ny fifandraisan'ny paratrooper miaraka amin'ny parachute, ary na ny fitsinjarana ny vesatra aza. Ny satchel dia napetraka ao an-damosin'ny mpanamory ary misy ny sehatra roa. Amin'ny iray dia ny parachute lehibe, ary amin'ny faharoa - sery. Amin'ireo sehatra roa ireo dia ampifangaroana ny tadio fizarana (raha ny marina, ny bokotra parachute). Ny satchel dia azo ampiasana mekanika tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana amin'ny fomba ara-dalàna na manokatra ho azy ny dome backup.
Ny asany dia hita mazava. Mampiroborobo ny fianinan'ny mpanamory. Miorina amin'ny:
Ny lambam-pifandraisana. Avy amin'ny kapron mahery vaika dia singa izy ireo amin'ny fifandraisana ny rafitry ny fampiatoana sy ny kanopian'ny parachute.
Tsipika mifehy. Miaraka amin'ny fanampian'izy ireo, mifehy ny hetsiky ny parachute ny paratrooper.
Slider. Fitaovana mampihena ny fiakaran'ny vidin'antoka amin'ny dome sy mampihena (manafintohina ny fanentanana) rehefa misokatra.
fakan-tsary. Tranon-drindrina, tenda sy antsy no misy azy io.
Parachute azo tanterahina (jellyfish). Mampiroborobo ny famoahana ny dome lehibe sy ny aotra avy amin'ny satchel.
Raha vantany vao manomboka ny fandefasana ny dome lehibe ny paratrooper dia misy ny parasy tsy misy dikany ary avoaka. Amin'ny fihenjanana azy dia miasa amin'ny fantson'ny dome lehibe izy io ary mamoaka izany miaraka amin'ireo maintso. Nizotra ny tsipika ary nisondrotra ny dome, ary ny tsimoramora dia nidina tsikelikely niaraka tamin'ny tsipika. 2 ka hatramin'ny 5 segondra no ilainy.
Spare Dome. Ny votoatiny dia mitovy amin'ilay dome lehibe. Ampiasaina raha toa ka tsy misokatra ilay main-kevitra, na miasa tsy diso. Amin'ny tranga faharoa, amin'ny rafitra sasany dia mila miala any amin'ny parachute lehibe ianao ary avy eo hanokatra ilay làlana.
Fitaovana fiarovana. Natao hanerena ny parachute vonjy taitra ho any ambany indrindra. Miorina amin'ny bika, fanaraha-maso sy ny unit-processor. Mihodina mandritra ny fihenany ny fitaovana ary tsy mitsahatra (hatramin'ny 100 in-XNUMX isan-tsegondra), manara-maso ny haavon'ny haavon'ny hafanana sy ny tsindry amin'ny atmosfera. Ary raha ny taratasim-panamarinana dia manondro fa ny parachutist eo amin'ny haavo ambany dia mbola ao anaty faritry ny fahalavoana maimaim-poana, ny fitaovana dia mampiasa mandeha bika, ny fisintahana izay manomboka ny fisokafan'ny dome vonjy maika.
Amin'izao fotoana izao, ny fialamboly parachute dia fialamboly fialamboly hafa, ary miketrika amin'ny fikarakarana ny hitsambikina toy izany izy ireo Sekoly sidina. Ny hitsambikina toy izany dia mikendry ireo tia ny haavony sy mampientanentana. Aza hadino ihany anefa ny fiheverana fa tena fialamboly be tokoa ilay parachute ary misy fepetra maromaro contraindications fitsaboana:
Ny fanazaran-tena mandroso indrindra amin'ny fananganana lanitra dia Accelerated Free Fall (AFF). Izy io dia fomba fiasa maoderina eken'ny sehatra iraisam-pirenena, ny andraikitry ny fampianarana ny olona ny teknikan'ny fahalavoana malalaka ary hivoaka amin'ny toe-javatra tsy miovaova eny amin'ny rivotra.
Raha mitsambikina dia ampiasao kiraro avo miaraka amin'ny tendron mahery ny kiraro avo. Raha mitsambikina amin'ny kiraro ambany ianao dia araraoty ampiasaina mampiasa fehiloha marika hiarovana ny kitrokely, mba hialana amin'ny ratra.
Karakarao amin'ny akanjo mety. Aza hadino fa ny fidinana amin'ny lisitry ny fidirana dia mitranga amin'ny haavon'ny 800-1000 metatra, ary amin'ity haavony ity dia eo ho eo amin'ny mari-pana eo amin'ny 7 degre ny mari-pana ambany noho ny eto ambonin'ny tany. Ny rivotra mahery koa no tena mety.
Aza adino ny mihaino ny dinidinika mialoha. Farafaharatsiny, tsy fampahalalana ilaina sy ilaina fotsiny izany, fa fomba iray hamongorana ny tahotra amin'ny hitsambikina ho avy.
Dia ho tsara ho anao ny zava-drehetra! 😉